I-Blonde enamehlo aluhlaza - intombazana eyimfihlelo, uyathandeka kwaye uyathobe. Ngokukodwa ngokufanelekileyo kunokwenzeka ukugxininisa ubuhle bayo ngoncedo lokwakheka. Nangona kunjalo, ukuzenzela ama-blondes ngamehlo aluhlaza kufuneka kuhambelane neminye imithetho engafanelekanga, ekhokela nayiphi na ingcali yomculo.
Akunakutsholwa ukuba ukwenziwa kwe-blonde ye-green-eye yindlela esibhala ngayo-kwaye akukho nto enye. Intombazana nganye ngumenzi wezenzi-mveliso, ngoko akudingeki ukuba uchithe iimvavanyo. Iseluleko sethu sisiluleko nje kuphela, kodwa ukuba ufuna enye into-kutheni? Zama, ukudibanisa ukudibaniswa, ukudlala ngokungafaniyo - kwaye ngokuqinisekileyo bonke baya kuphuma!
I-Eye make-up ye-blonde-eyed blonde
Zama ukusebenzisa zonke iimpawu ezibomvu kwi-makeup: ukusuka kwigolide kunye ne-ocher ukuya kumbala wechocolatelethi emnyama. Ndikholelwe, oku kukhetho lokuphumelela. Eyona nto ibonelela kakuhle iinqwelo zakho ezinobumnyama obumnyama obumnyama, ubeka igolide.
Isiseko sifaneleka ipayishe kunye ne-gray nge-brown shaps of shade. Ngokudibanisa ne-shades emnyama, le mibala iya kubonakala ilungile.
Kwakhona, amehlo akho amnandi kunye namava aluhlaza anombala obomvu (amnyama!) Kwaye iiflum shadows, kunye nezithunzi ezinokukhanyeka kwe-metal - zifanelekile ukulungiselela imini. Kodwa ngokuhlwa kusilungele ukukhetha imibala yegolide kunye nobhedu - uya kujonga.
Nangona kunjalo, kukho imibala kunye nemibala eyenziwa ngabaculi abacebisi kakhulu ukuba bangayincoma ukuba basebenzise ama-blondes ekwenzeni ngamehlo aluhlaza. Cinga ngala mabhokisi.
Ukuqala, ungabandakanyi yonke i-shadow shades: ukusuka eluhlaza okwesibhakabhaka, ukuya kumbala wamanzi olwandle olumnyama. Le mibala ayihambelani nombala oluhlaza wamehlo.
Nceda uqaphele ngezithunzi ezimnyama. Kungcono kunengqondo, kuba ezinye zazo zibukeka zihle kakhulu kwiinkophe ze-blonde ye-green-eye, ngelixa abanye bangenza umphumo ophazamisayo, kwaye amehlo akho aya kubonakala ebuhlungu, avuvule kwaye aphuze. Nangona kunjalo, apha asikwazi ukucebisa into ethile - kuphela wena ufanele ukuyiqonda: yiyiphi i-shades eya kuhambelana nawe, kwaye yiyiphi into ayifanele igcinwe kwikhwama lakho lezonyusa.
Ukuba amantombazana enamehlo aluhlaza asemnyama, izithuba zengqungquthela ye-blue-eyeed contractions.
Ngoku ke makhe sithethe malunga nombala oya kujonga naluphi na i-blonde eyamehlo eluhlaza.
I-classical black eyeliner okanye ipensela-ngumkhuba. Nangona kunjalo, i-blonde eyamehlo eluhlaza ungayisebenzisa kuphela xa engakwazi ukuhlala ngaphandle kwalo mbala kwaye ukuba ikhululekile kangangoko kunokwenzeka kuyo. Kodwa ukuba usulungele ukumkhuphela ngaphandle kwe-arsenal ukuze wenze i-eye-make-excluding. Thatha i-gray-eyeliner engcono. Ukuba ucinga ukuba unamehlo amancinci - sebenzisa intambo emhlophe okanye yegolide. Kwaye kungcono - thabatha ipensela. Njengoko uyakhumbula - umbala obomvu ungabandakanywa kwindlela yokwenza amehlo.
Ngokubanzi kunye ngokubanzi, xa ukhetha - zeziphi izithunzi zokufaka isicelo ukudala umfanekiso ohambelanayo, usenokhetho lokufudumala. Ubunzima buya kuba budala kuwe.
Nangona, njengoko sele sichazile, musa ukuyeka ukuvavanya. Ufuna isilivere kunye ne-blue fluorescent - nceda. Ngaba ufuna i pinki ehlabathini lonke? Ngoko, zikhululeke ukuyeka umfaki sicelo kwizithunzi ezimnyama.
Enyanisweni, inkqubo yokusebenzisa iso kwindlela ezininzi kuxhomekeke ekubeni luya kuba lukhulu kangakanani. Nangona kunjalo, ukuba ukhetha lula ukwenza kwansuku zonke, zama ukuzisebenzisa njengale:
Okokuqala, sisebenzise isiseko, isiseko, kwiphilodi yonke ephakamileyo (ukusuka kwintambo yejwabu leso - kwaye phantse ukuya kweelishi). Ungakhethi u-matte, kodwa izithunzi ezimnyama.
Gubungela isiseko kunye nemithunzi yeeperekisi okanye umthunzi omnyama obomvu, udibanise ne-brush elula.
Ngoku thabatha izithunzi ezimnyama (i-tsokolate yobisi, ubhedu, obumnyama) kwaye uyisebenzise njengale:
- ukusuka emkhatsini weminyaka yobudala (umda ongaphantsi umda wokukhula kwe-cilia, umda ophezulu ngumda ongentla kwinqanaba lekhosidi), sebenzisa izithunzi ezimnyama uze udibanise ngomunwe wakho, wenze uguquko oluvela ekukhanyeni luze luzaliswe lungacacile, kodwa lube lukhulu kwaye lubushelele;
- faka umfaki-sicelo ngezithunzi zomgca ukusuka ngaphandle ukuya kwikona elingaphakathi kweso, le mgca nayo ifuna ukulungiswa ngokufanelekileyo.
4. Khupha amehlo akho nge ipensela okanye intambo ebomvu okanye enemibala. Ukuba ukhetha omnyama, umthunzi umgca.
5. Tint i-eyelashes ngeenki ezimnyama.
Emva kokuba wenze ezi zenzo ezilula, uya kufumana i-eye day-day impeccable.
Ubumba be-Lip for blonde-eyed blonde
I-Blonde ingenza ukugxilwa okusemgangathweni ekwenzeni hhayi kuphela kwamehlo amahle aluhlaza, kodwa emlonyeni!
Nangona, ukutsala imilomo yakho ngemibala eqaqambileyo kunye neyohluthwayo kungcono xa ukwenza ukuhlwa kwamanzi.
Ngomhla wokwenziwa kwe-blonde ye-green-eyed, i-lipstick ye-shades ebomvu kunye ne-pink-pink shades, inqabileyo encinane, ilungile. Musa ukuwayeka phantsi ipensele emnyama - ungangcongi umonakalo womlomo wakho.
Ukuba ufuna ukubonakala ngokukwandisa iiponji, sebenzisa i-gloss kwi-lipstick. Qinisekisa ukuba umthunzi okhanyayo udibeneyo kunye nombala we-lipstick.
Ukuqhafaza nge-blonde ngamehlo aluhlaza
Apha, ukhetho lwakho luxhomekeke ngokupheleleyo kumthunzi wesikhumba.
Ukuba utyuntshiwe okanye unobumba obumnyama obumnyama, ngoko ufanele ukhethe okukhethiweyo kumthunzi omnyama. Musa nje ukuwudlulela - sebenzisa kakuhle, udibanise ngokugqithiseleyo ukugqithisa okugqithiseleyo kwi-brush ebanzi. Ubunzima obuBrown abugcini nje ukuthungela i-cheekbones, kodwa kwakhona kunceda ukufanekisa ngokufanelekileyo ubuso: yenza unciphise isikhumba esicacileyo okanye wenze i-cheekbones ibonakale isele, "isanciphise" inkunzi ebunzini.
Kodwa ngenxa ye-blonde eyamehlo enobumba obuhlaza-baluhlaza, i-peach-colored blush iyinto enhle. Ukuba unamahloni kwaye kukuhlazisa - ungakhathazeki, ukufihla ukufihla oku kunqongophala kwesikhumba, ubuso bakho buya kukhanya kwaye buhlambuluke!
Kodwa, naluphi na umbala wezithunzi, umthunzi we-lipstick ne-blush awukhethi, into eyona nto kukuthanda
ngokwakho, ukwazi ukuzithoba kwaye, ngokuqinisekileyo, uphile ngokumomotheka ebusweni bakho!
Ubuhle ngaphandle kokunciphisa: I-TOP-3 imikhiqizo yobuhle kwimihla yeeholide
Isikhumba se-Gym - i-summer beauty beauty trend
Buckwheat kunye nemifuno kwi-multivark
Isidlo kunye neekroti, i-parsnips kunye nama-dumplings
Black Pearl, okanye Indlela yokukhetha umgubo womtshato omnyama
Irayisi zasendle kunye nemifuno kwi-multivark
Isaladi kwintliziyo ebilisiwe